Mpanamboatra sy mpamatsy COUPLERS - China COUPLERS Factory
BONOVO tonga lafatra fitongilanana haingana kopia ho an'ny karazana excavator rehetra
Ny Bonovo Tilt Quick Coupler dia afaka mihazakazaka ny siny na ny fametahana hatramin'ny 180 ° mora foana. Raha ampitahaina amin'ny mpamandrika haingana mahazatra dia afaka mahatakatra ny elanelam-potoana sy ny zoro ny fiasan'ny excavator.
BONOVO dia mamokatra lozisialy hay azo ovaina azo ovaina mba hifanaraka amin'ireo maodely excavator isan-karazany
Bonovo Hydraulika Quick Coupler dia manolotra mpiorina haingana haingana ho an'ny marika lehibe rehetra sy ny ankamaroan'ny mpitrandraka. Bonovo Hydraulika Quick Coupler dia manana fananganana sarotra, fahaiza-manao amin'ny fampifangaroana amina marika mifamatotra, endri-javatra azo antoka, hidin-trano henjana ary mora ny fampiasan'ny mpandraharaha. Ny afovoany pin azo ovaina mba hamolavolana endrika afovoany dia ahafahan'ny mpiray tsikombakomba mitovy amin'ny milina maro samy hafa amin'ny kilasy tonina mitovy.
BONOVO mpamono haingana mekanika avo lenta amin'ny karazana milina rehetra izay azo ampifanarahana tsara
Bonovo Mechanical Quick Coupler dia natao hampiasaina amin'ny siny sy kofehy namboarina OEM. Bonovo Mechanical Quick Coupler dia manome fomba tsotra sy haingana hanovana ny siny sy kofehy vita amin'ny excavator.